မယ့်ကိုး: “ ပြတင်းပေါက်ကလေးများ”
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 8/30/2011 09:54:00 AM
ဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘဲရေးရေး..အရေးအသား..ဖွဲ့နွဲ့တင်ပြပုံ..ကောင်းလို့အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..ဒီ comment ရေးတာဘယ်သူလဲ..သိရင်..အမှတ် ၁၀၀ +.. <3
⋯⋯♥ Happy blog Day 2011 ♥⋯⋯
မယ်မယ် ' လည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်
30/8/11 12:21 PM
30/8/11 4:51 PM
စာလာဖတ်တဲ့ မသက်နန္ဒာနဲ့ မမrose ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
ညီမလေးငုဇာခိုင်လို့ထင်ပေမယ့် သူက အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မနဲ့အတူတူရှိနေတာဆိုတော့ မမှန်းဆတတ်ပါဘူး။ စာလာဖတ်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရင်း အဖြေမပေးနိုင်လို့ အရှုံးပေးပါတယ်း)
30/8/11 6:39 PM
(blog ဆိုတာ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်မျက်နှာပြင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပေးတဲ့ ကြေးမုံပြင်၊
မစဉ်းစားမိတာကို တွေးတောမိစေတဲ့ မေးခွန်း၊စိတ်အညောင်းပြေအောင် လျှောက်လည်လို့လည်းရတဲ့ လမ်းကလေး၊
ဘဝပင်လယ်ထဲကို အလင်းဖြာထွက်နေတဲ့ မီးပြတိုက်လေး၊
ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့ ဖွင့်ပေးထားတဲ့ လမ်းတံခါးတစ်ခု)
စာများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်၊ ကိုယ် မရေးနိုင်လို့
မယ့် ပြတင်းပေါက်ကို ညီမလေး တံခါးလာခေါက်သွားပါတယ်..
ဘလော့သက်တမ်းအရ ညီမလေးလို့ မခေါ်တော့ဘူး၊ ဘလော့ဒေး အမှတ်တရပို့စ်လေး ရေးပေးတဲ့အတွက်
ကျေးဇူးပါ ညီမ အဲ ... အမရေ ... :D
31/8/11 12:24 AM
ညီမလေး ကမနက်ကဖေ့ဘွတ်ကဖတ်တာနေတာလေ ... အခုမှဘလော့ရောက်တာ... ညီမလေးလိုပဲ နာမည်မဖော်လိုဘူးတဲ့။ ဘယ်တူပါလိမ့် T_T
31/8/11 12:53 AM
Happy Blog Day ပါအမကိုး။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ အမဝါသနာပါတဲ့ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်းတွေကို ချမ်းမြေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ။
1/9/11 12:36 AM
လူမသိ သူမသိ ပြူတင်းပေါက်ကလေးက ခုတော့လည်း ခန်းဆီးတွေ လိုက်ကာတွေ ပြည့်စုံစွာနဲ့ သာယာလှပနေတယ်နော်
ပြတင်းပေါက်လေး အမြဲအစဉ် သာယာလှပစွာရှိပါစေ။ ပြတင်းပေါက်လေးကနေလေကောင်းလေသန့်များ ဖြတ်သန်းခွင့်ရပါစေလို့
1/9/11 3:04 AM
ဟက်ပီး ဘလော့ဂ်ဒေး... (တစ်ရက်တောင် နောက်ကျသွားပြီ၊ ဆောရီး :D)
ချစ်ရတဲ့ ညီမလေး.. နောင်နှစ် နောင်နှစ် ဘလော့ဂ်ဒေးပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ကဗျာတွေ စာတွေ အခုလိုပဲ အများကြီး စပ်နိုင်ပါစေ...လို့..
•。 ★.★ 。* 。
ကဗျာလေးကလှသလို မယ်ကိုးဖွဲ့ထားတဲ့စာလေးကလည်း အရမ်းလှတယ်။ ဘလော့ဂ်ကို တင်စားထားမှုလေးတွေကလည်း တကယ်ကိုပီပြင်တယ်။ သဘောကျလိုက်တာ။ ဟုတ်တယ် အစ်မလည်း ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး စလုပ်ဖြစ်တုန်းက အဲဒီလိုမျိုးပဲ ကိုယ့်အတွက် ပြတင်းပေါက်လေး၊ တံခါးပေါက်လေးတစ်ခုလို့ ခံစားတွေးကြည့်ခဲ့မိဖူးတယ်။
11/9/11 12:26 AM
း) မမယ်ကိုး ကျန်းခန့်သာမာပါစ
စာတွေအကုန်ဘတ်တယ်ဆိုလို့ တီ့ဆီရော ရောက်ဘူးလား
16/4/12 4:22 AM
when I visit toablog, I want to beablogger. Happy blogger Day!
31/8/13 9:42 PM
အခုအတိုင်းပဲ စာတွေ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ စိတ်ထဲရှိသလို ရေးပါ...
မယ့်စာတွေကို နှစ်သက်စွာ အမြဲဖတ်နေသူပါ..။
မမယ်ရဲ့ စာအရေးအသားလေးတွေက ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးဆန်းသစ်တဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို ရစေတယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အသိတွေက ဘာပြောလဲဆိုတော့ စကားလုံး ၂ လုံးနဲ့ ပြန်ကောက်ချက်ချကြတယ်။ "ဒန်တယ်" တဲ့. :P
ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest Page လေးအတွက် အမှတ်တရ ယူသွားပါတယ် sis ရေ... နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ပြတင်းပေါက်တွေကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေ. (ဆွေမျိုးတွေကို မေ့ထားပြီးတော့ပေါ့) :D
မယ့် စာလေးတွေတိုင်း အမြဲ နှစ်သက်တတ်တဲ့
5/9/13 3:56 PM